ပါးပျဉ်းရပ်ဂ်ဘီချွေးထွက် | ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » ရပ်ဘီချွေးထွက် hoodie
အေးမြသောရာသီဥတုများအတွက်အဖော်က၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်: အစနစ်တကျထည်အတွင်းပိုင်းအင်္ကျီလက်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မတ်မတ်တစ်ဦးအလင်းထိတွေ့ထည့်သွင်းနေချိန်မှာဒါဟာနွေးသငျသညျစောငျ့ပါမညျ။ သတိပေးချက်: ပျံ့နှံ့၏အန္တရာယ်!
အဆိုပါ hood ကိုချွေးထွက်ရပ်ဂ်ဘီသည်သင်၏ Sexy ရပ်ဘီရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစားစတိုးဆိုင်များစုဆောင်းခြင်း၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားမှုအတွက်လူသိများထုတ်ကုန်များ၏တစ်ရွေးချယ်ရေးကပိုင်ဆိုင်သည်။ အရောင်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောပုံနှိပ်အရည်အသွေးမြင့်ရှာဖွေပါ။
ရပ်ဘီဆိုင် - - sexy ရပ်ဂ်ဘီ Hoodie ချွေး
sexy ရပ်ဘီဿုံပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်ရာပူဇော်သက္ကာကိုအရည်အသွေးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလမ်းပေါ်ကစတိုင်, ဒါမှမဟုတ်ဂန္များအတွက်သင့်လျော်သောတစ်ချွေးထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာအပိုင်းအစလည်းသင့်ရဲ့အားလုံးအမျိုးအစားများအားကစားလေ့ကျင့်ရေး, နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီရန်သင့်အားအတူလိုက်ပါနိုင်ပါ။ အဆိုပါချွေးထွက်ရပ်ဂ်ဘီနွေရာသီညနေခင်းအနည်းငယ်အေးများအတွက်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ကောင်းတဲ့ဖိနပ်, ဒါမှမဟုတ်ဘောင်းဘီတိုနှင့်အတူအားလုံးရာသီအတွက်ဝတ်ဆင်ရန်ကိုချစ်သူကိုယောက်ျားတို့အတွက်ရည်ရွယ်သည်။
အဖြူရောင်မှအနက်ရောင်ကနေမီးခိုးရောင်မှတဆင့်အပေါင်းထိုကဲ့သို့သော burgundy, ရေတပ်အပြာသို့မဟုတ်အနီရောင်အဖြစ်ခေတ်မှီအရောင်များ: အဆိုပါဆွယ်တာအင်္ကျီကွဲပြားခြားနားသောမူရင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဂန္အရောင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအားကစားသို့မဟုတ်မြို့ wear နှင့်အတူဿုံပေါင်းစပ်။ S ကထဲကနေ XXL မှမရရှိနိုင်ပါကလူအပေါငျးတို့ကိုပေးတော်မူ၏။
အဆင်ပြေထည်၏ လုပ်. , ပျော့နှင့် cuddly (80% ဝါဂွမ်း, 20% polyester), ဒီပရီမီယံဆွယ်တာအင်္ကျီအရောင်ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ထည်ကပူနွေးတဲ့ဆွယ်တာအင်္ကျီများနှင့်ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေအောင်, အလွန်အကြမ်းခံခြင်းနှင့် cuddly ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ပြင်ဆွဲကာပါးပျဉ်းနှင့်ကြီးမားသောအိတ်ပါဝင်သည်။ သူကလိုအပ်သောလျှင်, ပါးပျဉ်းကိုထိန်းညှိဖို့နှစ်ခု drawstrings ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ရရှိနိုင်သောအများအပြားအရောင်များကိုမှရွေးပါနှင့်သင်တို့အဘို့အရည်အသွေးမြင့်ချွေးထွက်ရှာတွေ့! ဒါဟာအစအားလုံးအခါသမယများအတွက်တစ်ဦးအနီးကပ် (စသည်တို့ကိုမွေးနေ့အားလပ်ရက်ရာသီ) မှရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်စေမည်။ ဒါကြောင့်သင်ကဖွင့်လတံ့သောအရောင်ကဘာလဲ?
ဒီ Find hood ကိုချွေးထွက်ရပ်ဂ်ဘီ ရပ်ဘီရပ်ဘီဆိုင် Sexy အတွက်
ဆိုင်ရပ်ဂ်ဘီ: ရပ်ဂ်ဘီသည် T-ရှပ်အင်္ကျီ, ချွေးရှပ်အင်္ကျီ, ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ, လက်ဝှေ့သမား, ဆက်စပ်ပစ္စည်း, အဖုံးများ, ဦးထုပ်, ဦးထုပ်, အောက်ခံ, အိတ်, ထီး, ခွက်, ခါးစညျးရှေ့ဖုံးနဲ့အလှဆင်။
အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပို့မည် သင်တို့၏နာမ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ cancel
အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်စလှေတျတျောမခဲ့ - သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုစစ်ဆေး!
အီးမေးလ်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုချက်ပျက်ကွက်, ကျေးဇူးပြု. ထပ်ကြိုးစား